Posted by Demo Wave , at 9:10 AM 1 comments
Posted by Demo Wave , at 2:48 AM0comments
နိုင်ငံလုံးကျွတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် နိင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်မည်ဟု လည်းကောင်း ၊ နိင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးများ ပြုလုပ်မည်ဟုလည်းကောင်း နှစ်ဘက် မူဝါဒများဖြင့် နိင်ငံ ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်သို့ သွားနေသည်ကို မြင်တွေ့ရပါသည်။ယင်းသို့ သွားရာတွင် မှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖော်ဆောင်ရန်လိုသည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာသည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သော Semi-Government ဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာအလှုငွေများဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရသည်ဖြစ်သည့်အတွက် ရရှိနှင့်သုံးစွဲငွေစာရင်းများ ကို ပြည်သူများ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနိုင်စေရန် “ပွင့်လင်းမြင်သာမှု” ရှိရှိ ချပြရန်လိုအပ်သည်။ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုရခြင်းမှာ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ ၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများ ၊ ဒေါက်တာတစ်ဦးမှ လခငွေ ဒေါ်လာတစ်သောင်းတောင်းဆိုမှု သတင်းများ ၊ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား ကားပါမစ်များ ချပေးမှုဖြင့် စည်းရုံးဆွဲဆောင်ခြင်း စသည့် သတင်းများ ပြန့်နှံ့နေသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ။ ယခုဖော်ဆောင်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်သည် သမိုင်းတွင်မည့်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့ သမိုင်း တွင်မည့်ကိစ္စတွင် ဖော်ဆောင်နေသူတို့သည် မျက်တောင်မွှေးတစ်ဆုံးသာ ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွါးရေးရောစပ်ကာ သမိုင်းတရားခံ အဖြစ်ခံမည်လား ၊ မိမိတို့ သားသမီးမြေးမြစ်များကို ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ကြီးများ၏ မျိုးဆက်များဟု ဂုဏ်ယူစေချင်သလား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားကြီးတို့ရဲ့  မျိုးဆက်ဟု ကဲ့ရဲ့ ခံမည်လား ကြိုက်ရာရွှေးချယ်နိုင်ပါသည် ။
ကားပါမစ်များထုတ်ပေးခဲ့သည် ဆိုသည်မှာလည်း ဆွေးနွေးပွဲကာလ နှင့် ယုံကြည်မှုတည် ဆောက်ဆဲကာလတွင် ပြည်တွင်းရှိ နေရာဒေသများအား နိုင်ငံတော်ဥပဒေနှင့်အညီ လိုင်စင်ရှိကားများဖြင့် အလွယ်တ ကူမောင်းနှင်သွားလာနိုင် စေရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့၏ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များအား လိုင်စင်ရရှိစေရေးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့ ရည်ရွှယ်ချက်ဖြင့် ချပေးလိုက်သည်ဟုဆိုသော်လည်း မြန်မာနိင်ငံကားလောကတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်များဖြင့် တန်ဖိုးကြီး ကားများ တင်သွင်းမှုများ များပြားလားပြီး လိုင်စင်မရရှိသေးခင် လက်ပြောင်းလက်လွှဲရောင်းချရာမှ ပြဿနာမျိုးစုံတတ် နေပါသည်။ ထိုသို့ မလိမ့်တပတ် နည်းဖြင့် တင်သွင်းမှုများ ၊ ပါမစ်လက်ပြောင်းမှုများအား ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ထောက်ခံစာများဖြင့် လုပ်စားနေသည်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဟု သမုတ်ခံရခြင်းမှာ မလွန်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ) မှ ဦးပီတာလင်းပင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ရှိလာသော အခါတွင်လည်း မိမိအိမ်နဲ့ခြံကိုရောင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကျိုးပြုနေသည်ဟု ပြောဆိုတတ်သော ဦးအောင်မင်းနှင့် ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရလို့ သူလည်း လူမွဲစာရင်းဝင်တော့မယ်လို့ ဦးအောင်မင်းပြောတတ်သော ဦးလှမောင်ရွှေ တို့နှစ်ဦးကလည်း ဦးပီတာလင်းပင်ကို “ အင်လျားကန်စောင်းမှာ နေအိမ်လည်းပေးမယ် ၊အခုစီးလာတဲ့ ကား၃စီးထဲက ကြိုက်ရာယူသွား ။ သုံးစရာမရှိရင် သိန်းတစ်ထောင်ပေးမယ် ။ဖုန်းလည်းပေးမယ် ” လို့ပြောဆိုခဲ့တာတွေ က မည်သည့်သဘောများပါလဲ ။ယင်းသို့ ပေးအပ်မည်ဆိုသည်မှာလည်း ဦးအောင်မင်း၊ဦးလှမောင်ရွှေ တို့ ပိုင်ဆိုင်ထား သည်များကို ပေးသည်လား ၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲက ပေးသည်လား ဆိုသည်မှာ သံသယပွါးစရာဖြစ်ပါသည် ။မည်သည့်ပိုင် ဆိုင်မှုပင် ဖြစ်ပါစေ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၊ အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေး အတွက် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေး စကားဝိုင်းမဟုတ်ဘဲ၊တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအဖြေရှာခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဘယ့်ကြောင့် ပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့် ဗန်းပြစည်းရုံးသော နည်း ဗျူဟာ ဖြစ်နေပါသလဲဟု အမေးရှိလာပါသည်။အကယ်၍ ထိုသို့ ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် စည်းရုံးနည်း အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုပါက နောက်နောင်တွင် ထို့ထက်မကသော ပေးကမ်းမှုမျိုး (သို့မဟုတ်) ထို့ပမာဏနည်းတူ ရပေါက်ရလမ်းများ ဖန်တီး ပေးထားမည်၊ နိုင်ငံရေးလောက ဂယက်မရိုက်ရင်ပြီးရော ဟူသော သဘောမျိုးပင်လား ဟု တွေးတောမိပါသည်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဆိုသူများအား ဤကဲ့သို့ စီးပွါးရေးနည်းနှင့် ဆွဲဆောင်မှုများမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်ကမ်းမှု အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါ ။ မိမိသည်လည်း တိုင်းရင်းသားဒေသများ အထူး သဖြင့် အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုလက်တံ ထိရောက်စွာ မစိုးမိုးနိုင်သော ခေါင်းပါးဒေသများတွင် ၀န်ထမ်းအဖြစ် ထမ်းဆောင်ဖူးပါ သည်။ယင်းအခြေအနေတွင် လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားဆိုသူများသည် တိုင်းရင်းသားတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားမပြုခြင်း များတွေ့ရပါသည်။လက်နက်ကို အားကိုး၍ တပ်ဖွဲ့စီးပွါးရေးတောင့်တင်းရန်ပြုလုပ်နေခြင်းများသာ ရှိသည်။မိမိတို့ ငွေတိုက်များအား ယခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ဆိုသူတို့ လာရောက် ဖောက်ထွင်းယူငင်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် နီးစပ်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ပြည်သူ့စစ်များ စသည်တို့ကို လုံခြုံရေး အကူအညီတောင်း၍ ညဘက်တွင်ပင် ကြက်အိပ်ကြက်နိုး ဖြင့် ရင်တမမနှင့် ကုန်လွန်ခဲ့ရသော နှစ်များက အသိဖြစ်ပါသည်။အချို့ဒေသခံများဆိုလျှင် အစိုးရချ မှတ်ပေးသော ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးသော်လည်း အောင်မြင်မှုနည်းပါးသည့်အပြင် ၀ယ်လက်မရှိသည် က တစ်ကြောင်း၊ နှစ်ရှည်စွာလုပ်ကိုင်လာသော ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးကဲ့သို့ ၀င်ငွေမကောင်းသည်က တစ်ကြောင်း ၊ အဓမ္မ စေခိုင်းခံရမှုနှင့် မက်လောက်စရာ ပမာဏဖြင့် ဘိန်းတစ်ရာသီအတွက် ယင်းလက်နက်ကိုင်များမှ ကြိုတင်ငွေပေး၍ စိုက်ခိုင်းသည်တို့က တစ်ကြောင်း စသည့်အကြောင်းအရာမျိုးစုံဖြင့် နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသား တို့သည် အမှောင်ထုတွင်းမှ ရုန်းမထွက်နိုင် ကြသေးပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လည်း လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်သူတို့၏ အဓမ္မ စေခိုင်းမှုနှင့် လူသစ်စုဆောင်းခံရမှု များလည်း ရှိနေပါသည် ။စာရေးသူ အလုပ်မှ အနားမယူခင်ကာလများသည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အချိန်ကုန်ခဲ့ရသော ကာလများဖြစ်သည်။ယခုကဲ့သို့ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးကာလနီးကပ်လာပြီဆိုလျှင် တစ်ဖက်နိုင်ငံ လွယ်တိုင်းလျှံတွင် ပြုလုပ်သော နှစ်သစ်ကူးပွဲသို့ တတ်ရောက်ရန်ဟုသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လူငယ်များကို ခေါ်ယူပြီး လွယ်တိုင်းလျှံ တွင် စစ်သင်တန်းပေးကာ အချို့ကို ပြန်လည်စေလွှတ်ခြင်း ၊အချို့ကို တပ်သားသစ် ခေါ်ယူထားခြင်းများ ပြုလုပ်တော့မည် ဖြစ်သည် ။စာရေးသူရုံးတွင် လုပ်အားပေးလုပ်ဖူးသူ အိုက်အင် သည်လည်း ယခုအခါ ထိုနည်းဖြင့် တပ်သားသစ် ဖြစ်သွား ဖူးလေသည် ။
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ စီးပွါးရေးဆွဲ ဆောင်ခြင်းများ နှင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ဖက်လှည့်ဖြင့် ပါမစ်ရောင်းခြင်း စာရင်းအတိအကျမရှိသော အလှုငွေများနှင့် မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် လခယူခြင်းများ ပြုလုပ်မနေသင့်တော့ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစား ဟူသော စကားလုံးသည် တိုင်းပြည်၏ သစ္စာဖောက် ဟု မပြောရုံသာရှိပါတော့သည် ။အကယ်၍သာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်မြတ်နိုးသည်ဟုဆိုလျှင် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေးခံယူချက်အား စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရယူပြီး ယခုယင်းအဖွဲ့များအတွက် ကုန်ကျနေသော ငွေကြေးများအား ယင်းလက်နက်ကိုင်များကြီးစိုးရာ တိုင်းရင်းသားဒေသများ ၏ ဖွံဖြိုးရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွှက်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရောင်ခြည် သည် ထိုဒေသများတွင် အမှန်တကယ် တောက်ပနေပါလိမ့်မည် ။
ကြည်လင်း( ထနောင်းမြေ )
Posted by Demo Wave , at 2:39 AM0comments
Posted by Demo Wave , at 5:31 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုတလော လူစိတ်အ၀င်စားဆုံး ကိစ္စရပ်ကတော့ မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့  သည်းခြေကြိုက် စကား လုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး …ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို ရောက်ဖို့အတွက်လည်း လုပ်လိုက်ရတဲ့ အကြိုဆွေးနွေးပွဲ ပေါင်းများစွာ … ဒီလိုနဲ့ပဲ ပေရှည်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ … အဲဒီကြားထဲကပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖော်ဆောင်နေရင်း သဘောထားမမှန်မှုတွေ ငွေကြေးခ၀ါချမှုတွေ အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားတွေထပ်မံ မွေးဖွါးလာခြင်းတွေ စတဲ့ အရှူပ်အရှင်း တွေနဲ့ သပွတ်အူလိုက် နေလိုက်ကြတာ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက် စီးပွါးရေးထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်လည်း ပါပြီလားဗျာ ။
ငြိမ်းချမ်းေ၇း (Peace) မျဉ်းဇောင်းတွေခံထားတဲ့ နံပါတ်လှလှနဲ့ ကားအကောင်းစားကြီးတွေ လမ်းတွေပေါ် တတ် နေတဲ့ သတင်းတွေ ၊ ကားပွဲစားတန်းနဲ့ ၀ယ်/ရောင်းလောကတွေကြားမှာ အသည်းအသန် အလုအယက် ၀ယ်နေရ တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်တွေ ဟာ ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်နေရာမှာများ အကျိုးရှိနေပါသလဲ ။ ပြည်သူတွေ တကယ်အကျိုးရှိ မရှိတော့ မသိပေါင်။ မြင်တာပြောရရင်တော့ … ဟိုးအရင်တုန်းက ဘာပါမစ် ညာပါမစ် တွေထက် ဒီငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်က တယ်အလုပ်ဖြစ်ဆိုသကိုး။ ဈေးအနည်းဆုံး သိန်း ၅၀၀ ကနေ သိန်း ၅၅၀၀ ထိ ပေါက်တယ်ဆိုပဲ။ ပါမစ်ခြင်းအတူတူ ဘာကြောင့် ဒီကောင်က အဲလောက် ခေတ်စားနေရတာတုန်းလို့ အမေးရှိရင်တော့ သူက တန်ဖိုးကြီး ကားတွေကို ၀ယ်လို့ရတယ်ဆိုပဲ ။ တင်သွင်းခွင့်မရတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အင်ဂျင်ပါဝါကြီး ဇိမ်ခံကားတွေကို အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး ပါမစ်နဲ့ တင်သွင်းခွင့်ရပြီး အခွန်တောင် ဆောင်စရာမလိုဘူးတဲ့။ Eleven ဂျာနယ်ကတွက်ပြထားတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းများ အရဆိုရင် မြန်မာငွေသိန်းတစ်ထောင်တန် ၂၀၁၃ မော်ဒယ်ကားတစ်စီးကို ရိုးရိုးပါမစ်နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်လာရင် အခွန်အကုန် ဆောင်ပြီးချိန်မှာ သိန်း ၂၃၀၀ ထိဈေးမြောက်တယ် ။ဒါကို ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ် နဲ့ သွင်းလာချိန်မှာတော့ အခွန်ငွေ ၁၃၀၀ ဆောင်စရာမလိုပဲနဲ့တောင် သိန်း ၂၀၀၀ နဲ့ပြန်ရောင်းတာတောင် လျှော့ဈေးနဲ့ ပေးရတာပါ လို့တောင် ပြောကြတယ်ဆိုပဲ။အဲလိုမျိုးကားတွေဝယ်နိုင် သွင်းနိုင်ဖို့ အခုဆိုရင် ဦးအောင်မင်း (အိတ်စိုက်-ဦးအောင်မင်းပေါ့နော်) သူဖန်တီးပေးလိုက်တာ ကားပါမစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ တောင်ရှိတယ် ။ ဒါတောင် အိတ်စိုက်ပြီး အိမ်ရောင်း ခြံရောင်းနဲ့ လုပ်ပေး ရရှာတာ... ဟဲဟဲ ..အဲဒီ ပါမစ် ၃၀၀၀ မှာ ပထမအသုတ် ၁၀၀၀ က ကင်းလွတ်ခွင့်(FREE) နဲ့ ၀င်သွားပြီးပြီ . အခုဆိုရင် ၉င/**** တွေနဲ့ စီးနေပြီပေါ့နော် ။ တစ်ချို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေကတော့ ရတဲ့ပါမစ်ထဲက ပဲ သူတို့စီးနေတဲ့ ၀စ်သောက် ကားတွေကို လိုင်စင်လုပ်တယ်တဲ့။ဒီကြားထဲ KNU အတွင်းရေးမှူး ပဒိုကွယ်ထူးဝင်း ဆိုသူကလည်း အထွဋ်တတ် လိုက်သေးတယ် ။ပေးထားတာလောက်တောင် မလောက်ဘူးတဲ့ ။ ရထားတဲ့ အစီးရေ ၁၂၀ ကိုမှ အားမနာနော် . အခု မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နာမည်ကြီးဇိမ်ခံကား ရိုးရွိုက်ဘရန်းတွေ အစီး ၂၀ တောင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါမစ် နဲ့ ရောက်နေပြီတဲ့ ။ ဂျာနယ်မှာ ရိုးရွိုက်ကားတွေကို ထိုင်းဘက်ကနေ တာလဘတ် အုပ်ပြီးသယ်လာတာတွေလည်း တွေ့တယ် ။ Roll-Royce ၊ Bently၊ Lexus 2013 ဆိုတာမျိုးကလည်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ မီလျှံနာ ဘီလျှံနာတွေ ဇိမ်ခံစီးတဲ့ကားမျိုး မဟုတ်လား ။ ဒါတောင် နောက်ထပ် အစီး ၂၀၀၀ စာကျန်သေးတယ်တဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင် အပစ်အခတ်အရင်ရပ်မလား နိုင်ငံရေးအရင်ဆွေးနွေးမလား ဆိုပြီး တောင်စဉ်ရေမရ အငြင်းပွါးမှုတွေကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ အလှမ်းဝေးနေဆဲ ။နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံပြီးတိုင်း ယုံကြည်မှု တွေတိုးလာတယ် လို့သာဆိုကြတယ်…အလုံးစုံ ယုံကြည်မှုတွေ ဘယ်တော့များမှ ရမှာလဲ ..ဘယ်လောက်ထိ စောင့်ရဦး မှာလဲ ။မြင်တဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် တိုးပွါးလာတာ ယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူး ။UNFC ရဲ့ အင်အားတိုးလာတယ်။ MPC ရဲ့  လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေတိုးလာတယ် ။ UNFC ဆိုတာကလည်း MPC လက်တွဲခေါ်မှုနဲ့ အခုဆိုရင် မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ် လာပြီး သူတို့ဆိုင်ရာနယ်မြေတွေမှာဆိုရင် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ဘုရင်ငယ်တွေတောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲ။ အနောက် ကယ်ရီခန်းပေါ်မှာ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ လူ ၃/၄ ယောက်ပါတဲ့ ကားကြီးတွေ မောင်းလာရင် လမ်းပေါ်ကလူတောင် ဘေးဖယ်ဆင်းရတော့တာပဲ.. တိုက်မိရင်တောင် အတိုက်ခံရသူက ပြဿနာရှာခံရသတဲ့လေ..။ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့တွေနဲ့ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ဆီက နင့်နေအောင် ရထားတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုယ်စား အစိုးရက ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့ ၊ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပေးအပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာအလှူငွေတွေကို ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံကိုလည်း ချမပြပဲ အိတ်စိုက်လုပ်နေရတယ်တို့ ၊ အိမ်နဲ့ခြံရောင်းရတယ်တို့ ၊ ကိုနဲ့ပေါင်းမှ သူလည်း လူမွဲဖြစ်တော့တယ် တို့ဆိုတဲ့ စကားတွေက သိပ်ဆက်စပ်မှုမရဘူးရယ် … နောက်ပြီး MPC ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို လခ ဒေါ်လာတစ်သောင်း တောင်ဆို ကြားဖူးတာလေးပြောတာပါ ။ ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတို့ကတော့ ငြင်းကောင်း ငြင်းမှာပေါ့ ။ အဲလို ငြင်းရင်လည်း ထောက်စရာလေးတစ်ခုတော့ ရှိသေးတယ်။ လခမယူပဲ အိတ်စိုက်လုပ်နေရအောင် အရင် ဒီအ၀တ်အစားတွေမ၀တ်ခင် ၊ ဒီအဖွဲ့ထဲမ၀င်ခင်မှာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး ၊ လာဘ်စားမှုအများဆုံး ထိပ်ဆုံးဇယားက နိုင်ငံတစ်ခုမှာ အခုလို သိန်းသောင်း ဂဏာန်းနဲ့ချီပြီးကုန်ကျနေတဲ့ လုပ်ငန်းများအတွက် ဘယ်လိုများစုထားဆောင်းထား စီးပွါးရှာခဲ့ပါလိမ့်နော် ။ အဲ.. ညောင်မြစ်တူးတာ ပုပ်သင်ဥပေါ်ပြီလားပဲ ။
ရှိစေတော့… ကိုတွေ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ နောက်တက်တဲ့ ဘုန်းကြီး ၃ချက်မခေါက်ဖို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပဲ ။ဟိုဘက်လက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကပြောတာတော့ ကားလိုချင်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒါဆို မယူနဲ့လေ..ဘာလို့ ယူနေသေးလဲ ။ ကေအိုင်အို တို့ကလည်း ပြောတော့ ကားပါမစ်မလိုဘူးတဲ့ …မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး ရိုးရွိုက်ကားကို ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်နဲ့ စသွင်းတော့ သူတို့။ ဒီလို..ဒီလို အထာလေးတွေရှိတယ်။သူတို့နယ်မြေထဲက ထွက်သမျှက ပါမစ်ထက်ပိုကောင်းတယ် ထင်တယ်.စစ်ကိုင်းဘက်ကထွက်သမျှ မှောင်ခိုလမ်း သူတို့နယ်မြေထဲ ၀င်တော့ လိုက်ဖမ်းတဲ့ သူတွေနဲ့ ပစ်ကြခတ်ကြ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း လေးတွေလည်း ကြားရသေးရဲ့ ။ MPC ကလည်း အပစ် အရင်ရပ်မလား.နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်မလားနဲ့ အချိန်ဆွဲနေတဲ့ UNFC ကို ကြပ်ကြပ် အလိုလိုက်နော်။ အခုဟိုဘက်က တပ်ချုပ်ရာထူးတောင် အလှည့်ကျလုပ်မယ်ဆိုလို့ စစ်တပ်အောက်ခြေက မကျေနပ် ၊ သမ္မတရယ်၊ကုလ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊နိင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ၊ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ အကုန်လက်မှတ်ထိုးရမယ် သူတို့ဘက်ကတော့ တောထဲက သူပုန်အကြီးစား ဥက္ကဌ ဆိုသူကတော့ သူမလာနိုင်ရင် ဒုဥက္ကဌ လာထိုးမယ်ဆိုလို့ ပညာတတ် တွေကမကျေနပ်နဲ့တော့ ပွဲစဉ်က သိပ်လှတယ်ဗျို့ ။ဒါနဲ့ စကားမစပ်..နေပြည်တော် လွတ်တော်အသိုင်းအ၀ိုင်း သတင်းတွေကနေ ကြားနေရသလို သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတွေ ၀န်ကြီးဌာနတွေ အုပ်ချုပ်မှုကို ခဏခဏ ၀င်စွက်တယ် ဆိုတာလည်း မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ ။
Posted by Demo Wave , at 5:47 AM0comments
Posted by Demo Wave , at 5:33 PM0comments
Posted by Demo Wave , at 9:17 AM0comments
လစာတိုးဖို့ တင်တောင်းလာတာတွေတွေ့တော့ ယနေ့ လွှတ်တော်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ကြည့်မိပါတယ်… အစိုးရအသုံးစရိတ်များနှင့် အခြားအသုံးစရိတ် များစွာကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် တိုက်တွန်းမှုများရှိသလို ပြည်ထောင်စုအဆင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်း စစ်ဆေးမှုတွေ ရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ရဲ့ အသုံးစရိတ်ကိုတော့ မည်သူမှစစ်ဆေးခွင့် မရှိတာကို သတိပြုမိပါတယ်…
လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးရဲ့ လက်ရှိလစာဟာငွေကျပ် ၃ သိန်း ရှိပါတယ်… နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှ မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ လစာငွေဟာ အမေရိကန် နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေလစာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် နည်းနေတယ်ဆိုပြီး နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အမတ်တွေ အတွက် လစာငွေ ၆ သိန်း တိုးပေးရန်…. တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော် အမတ်တွေအတွက် လစာငွေကျပ် ၂ သိန်းတိုးကာ ၄ သိန်း ပေးရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်….
ဝန်ထမ်းလစာတိုးတယ်ဆိုတာ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရည်အချင်းတွေအပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်… အစမ်းခန့်ထားခြင်းများ၊ စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်းများ အဆင့်ဆင့်ပြီးမှ တစ်ဆင့်တိုးခံစားခွင့်ကို ရရှိပါတယ်… လစာတိုးမြှင့်ခံစားရလျှင်လည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ Pay Scale အတိုင်းပဲ တိုးရတာပါ… အခုတော့ လွှတ်တော်က လုပ်သက် ၂ နှစ်ခွဲဖြင့် လစာ ၂ ဆတိုးဖို့ တောင်းဆိုခြင်းဟာ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းအရသာ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖက်က စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် တော်တော်ခံစားရ လောက်ပါတယ်… “ပြည်သူ့ဆန္ဒ – လွှတ်တော်ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့ မျှော်လင့်ချက် လွှတ်တော်က ဖော်ဆောင်ရွက်” ဆိုပြီး ပြည်သူ့ဆန္ဒမဟုတ်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒတွေကိုသာ ၎င်းတို့ ဖော်ဆောင် နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…
နေပြည်တော်မှ လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦးအတွက် လစာအပြင် နေ့တွက်စရိတ် ၁ ရက် ၁ သောင်း ပေးရပါ တယ်… တစ်လဆိုရင် ၃ သိန်းဖြစ်ပါတယ်… လစာက ၃ သိန်း၊ ထပ်တိုးမှာက ၃ သိန်း၊ နေ့တွက်စရိတ်က ၃ သိန်း ဆိုလျှင် စုစုပေါင်း ၉ သိန်းကို ပြည်သူတွေရဲ့ အခွန်အခထဲက ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ခန့်မှန်း သိန်း ၆၀၀၀ လောက် ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီထဲမှာ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ လစာ သိန်း ၇၀ မပါသေးပါဘူး…
အလားတူ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ၈၄၈ ဦးအတွက် လစာသီးသန့် တစ်လလျှင် သိန်း ၁၇၀၀ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်… ဒါ့အပြင် တစ်မြို့နယ်လျှင် ဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ကို လွှတ်တော်ကို ချပေးရတာ ရှိပါ သေးတယ်…
နေပြည်တော်လွှတ်တော်ရုံးတွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌများ၊ ကော်မတီဥက္ကဌများနှင့် သား/သမီးများ၊ ဆွေမျိုးများနှင့် နီးစပ်သူဝန်ထမ်း ၁၇၀ ကျော် ခန့်ထားပြီး စာရေးများကို လစာ ၂ သိန်း၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း များကို ၁ သိန်းပေးဖို့ တောင်းခံထားတာလည်း ရှိပါတယ်… လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးဥပဒေကြမ်းတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးခန့်ဖို့ ထည့်သွင်း ထား ပြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လွှတ်တော်အမတ်တွေ အတွက် သီးသန့် PSO ၆၆၄ ဦး မကြာခင် ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အတွက် လစာနဲ့ အသုံးစရိတ် ထပ်ပေးရအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်…။
ဒါ့အပြင် လွှတ်တော်အမတ်များ တာဝန်ဖြင့်ခရီးသွားရန် အသုံးစရိတ်တစ်ရက် ကျပ် ၁၀၀၀၀ နဲ့ တည်းခိုစရိတ် တစ်ရက် ကျပ် ၅၀၀၀ သုံစွဲခွင့်ရှိပါတယ်… တစ်ရက်လျှင် ကျပ်တစ်သောင်းခွဲရတာကြောင့် လွှတ်တော်အမတ်များမှာ ရက်ရှည်ခရီးထွက်ချင်နေကြပါတယ်... ပြည်ပခရီးစဉ်တွေမှာ အောက်ခြေချင်းညှိ ဖိတ်ကြားခိုင်းပါတယ်… သွားချိန်မှာတော့ အုပ်စုလိုက် အများအပြား သွားကြပြီး ကုန်ကျစရိတ် သောက်သောက်လဲကို ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးပြပြီး ပြန်တင်တောင်းတာတွေလည်း ရှိပါတယ်…
ဒါတွေကို ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခရီးစဉ်မရှိချိန် လွှတ်တော် တက်တဲ့ ရက်တွေ့မှာ နေပြည်တော်လွှတ်တော်အမတ် ၆၆၄ ဦးနှင့် ဝန်ထမ်း ၁၇၀ အတွက် အတွက် တစ်လလျှင် သိန်း ၄၄၀၀ ကျော် ကုန်ကျပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ၈၄၈ ဦးအတွက် တစ်လလျှင် သိန်း ၁၇၀၀ လောက် ကုန်ကျပါတယ်… လွှတ်တော်ကို ၁ နှစ်ပတ်လုံး ကျင်းပမယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း တစ်နှစ်လျှင် သိန်းပေါင်း ၇ သောင်း ၃ ထောင်ကျော်ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေထဲက လွှတ်တော်သို့ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
လွှတ်တော်ရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို မည်သူကမှ စစ်ဆေးခွင့်မရှိပါဘူး… မေးမြန်းခွင့်လည်း မရှိပါဘူး… လွှတ်တော်ကလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့် ချပြထုတ်ပြန်ခြင်း လုံးဝမရှိပါဘူး…။ လွှတ်တော်မှာ ကော်မတီ ပေါင်း ၂၄ ခုရှိပေမယ့် ဘယ်ကော်မတီကမှ ပြည်သူကို အသုံးစရိတ်ချပြဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး… ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေထဲက ထုတ်ယူသုံးစွဲရတဲ့ ဒီငွေတွေ အပေါ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်တဲ့ အနေနဲ့ စစ်ဆေး ခံခွင့် ရှိရင်ဖြင့် ပြည်သူတွေအတွက် ကျေနပ်လောက်တဲ့ အနေအထားတစ်ခု ရောက်ရှိလာနိုင်စရာ ရှိပါတယ်…
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သြစတြေးလျ ခရီးစဉ်
Posted by Demo Wave , at 9:15 AM0comments
Posted by Demo Wave , at 9:13 AM0comments
လိုင်ဇာတွေ့ဆုံညီလာခံမှသည် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်သို့ ကူးပြောင်းစပြုနေပြီဟု ထင်မှတ်ရအောင်လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ(MPC) တို့၏ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုများမှ တွေ့နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပွါးလာသော အကြောင်းတရားများကမူ မျှော်လင့်ထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ် အမှန်လမ်း မဟုတ်ပါ။
အဘယ့်ကြောင့် ဤသို့ပြောရသနည်းဟုဆိုသော် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ကြည့်ပါ။ ယခင်က တရားမ၀င်လက်နက်ကိုင်များဟု သတ်မှတ်ထားရာမှ ဆွေးနွေးနေစဉ်ကာလ တစ်လျှောက်လုံးတွင် လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မြေပေါ်သို့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကေအိုင်အေဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်သည် မြစ်ကြီးနားမြို့ သို့ သူ၏ယာဉ်တန်းနှင့်လာစဉ်ကလည်း ဂျိန်းဖောမျိုးနွယ်စုများက ကြိုဆိုပြီး အခြားမျိုးနွယ်စုများကမူ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပေါ်သို့ တက်ရောက်လာသည့်အတွက် အားပေးကြိုဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ကေအိုင်အေအနေနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး ၎င်းဘက်တွင်ရှိသည်ဟု အထင်ရောက်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်တွင် ကန့်လန့်လုပ်လာပါတော့သည်။ ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိနေသော ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်အနေဖြင့် ရှောင်လွဲ၍ မရသောကြောင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသည်ဟုဝန်ခံခဲ့သော်လည်း ယင်းရှောင်လွှဲ၍ မရသောအချက်များကိုမူ ပြောဆို ခဲ့ခြင်းမရှိ။ မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်၊ တိုက်ပွဲအတွင်း ကေအိုင်အေမှ ချိုးဖျက်ထားသောတံတားများအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် စစ်တပ်မှ ကနဦးလမ်းကြောင်းအပေါ် မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရာမှ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်နေသည်။ သို့သော်လည်း ယခင်က ပြည်ပမီဒီယာကိုသာအားကိုးခဲ့ရသော ကေအိုင်အေအနေဖြင့် ယခုအခါ ပြည်တွင်းမီဒီယာကိုအသုံးချ၍ စစ်တပ်မှတိုက်ပွဲများဖန်တီးနေသယောင် ပြောဆိုခွင့်ရလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူသစ်စုဆောင်းခြင်း၊ စခန်းသစ် ဆောက်၍ ရိက္ခာများကောက်ခံစုဆောင်းနေခြင်းတို့ကို တရားဝင်ပြုလုပ်ခွင့်ရလာသည်။
ကေအိုင်အေနည်းတူ မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှ လက်နက်ကိုင်များကလည်း ယခုအခါ အစိုးရနှင့်စစ်တပ်၏မူဝါဒ များကို သဘောမတူပါဟူ၍ ကြေငြာလေသည်။အကြောင်းမှာ ဆက်ကြေးငွေဟုခေါ်သော အခွန်အခကောက်ခံ ငွေဖြင့် ၎င်းတို့တပ်များ အသက်ဆက်နေရသည်ဖြစ်ရာ အကယ်၍ ယင်းငွေများကောက်ခံမှုနှင့် လူသစ်မစုလျှင် ၎င်းတို့အင်အား လျော့နည်းသွားမည်ဟု အကြောင်းပြသည်။ ယခင်ကလည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရောက်ရှိမှု နည်းပါးသော ချင်းပြည်နယ်သည်ပင်လျှင် ယခုမူ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာရပ်ရွာတွင်း ပေါ်ပေါ် ထင်ထင်သွားလာနေပြီး လူသစ်စုခြင်းများ၊ ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနှင့် ပွဲများပြုလုပ်ခြင်းကို မတက်မနေရစသော ဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေသည်။
ဤသို့ဖြင့် MPC မှ ဆွဲခေါ်လာသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် ငြိမ်းချမ်းရေးသို့သွားမည်ဟုသာ တဖွဖွ ပြောဆိုနေသော်လည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် လက်နက်စွန့်ရေးဟူသော အချက်ကိုမူ သေမတတ်ကြောက်ရွံ့  ကာ ခေါင်းတွင်တွင်ခါနေသည်။ လက်နက်မစွန့်နိုင်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်သည်မှာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်။ ယခင်က နယ်စပ်ဒေသတွင်လှုပ်ရှားပြီး ပြည်ပတွင်သာ နေထိုင်ကျက်စားနေသော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ပြည်တွင်းရှိ မြို့ ကြီးများပေါ်ရောက်ရှိလာကာ ဟောပြောပွဲများ၊ စည်းရုံးပွဲများ၊ အလှူငွေတောင်းခံခြင်း၊ ရံပုံငွေ ရှာဖွေခြင်းများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြုလုပ်လာနေပြီ။ မည်သူမျှမကန့်ကွက်ရဲချေ။ ၎င်းတို့လုပ်ချင်သည်များကို မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ ငွေအား၊ လူအား၊ ပစ္စည်းအား၊ ပါဝါအာဏာအား အစရှိသဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရေ/မီး အစုံထားနိုင်ရေး ကူညီနေသည်။ ထိုသို့ ပစားပေးအပျော့ဆွဲဖြင့် ကူညီနေသော်လည်း လက်နက်ကိုင်များအနေဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသို့ ရောက်ရှိမလာပဲ ၎င်းတို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအား စီးပွါးရေးအင်အား၊ လူလက်နက်အင်အားများ တောင့်တင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ABSDF ဥက္ကဌသံခဲသည်လည်း ၎င်းတို့အား MPC မှ ကားအစီး ၆၀ ပါမစ်ပေးထားကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့မှာ အင်အားအနည်းဆုံးဖြစ်၍ ကားရရှိမှု အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင်ကျန် အင်အားကြီးအဖွဲ့များ မည်မျှရရှိနေပါသနည်း။
MPC အနေနှင့်လည်း လက်တွေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမှန်တကယ်ရည်ရွှယ်သည်ဟု မမြင်မိပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းအား ပွဲစားသဖွယ်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ထင်ရသည်။ MPC သည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အတွက် အစိုးရအဖွဲ့က ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေပေးခြင်းမရှိ၍ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ် နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့ များဖြင့် ရပ်တည်ရပါသည်။ လက်ရှိအထိ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့များ၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုသည် ဒေါ်လာ ၁၀၇ သန်းနှင့် ယူရို ၇ သိန်းကျော်ရရှိနေပြီး ဂျပန်မှလည်း နောက်ထပ် ၁၁ သန်းပေးဦးမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းငွေကြေးများ သုံးစွဲ မှုသည် စာရင်းအတိအကျရှိမလာပဲ ပျောက်ကွယ်နေပြီး MPC အဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း ၎င်းတို့အတွက် လခသဘော မျိုးဖြင့် ယူနေသည်မှာလည်း ကြေးကြီးနေပြန်သည်။ဤပမာဏဖြင့် မတည်ထားသော MPC အတွက် ဦးအောင်မင်း မှလည်း အိတ်စိုက် လုပ်ကိုင်နေရသည်ဟု ညည်းငြူဖူးပြန်သည်။ ထိုသို့ ငွေကြေးအကုန်အကျ များနေသော်လည်း MPC အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအား အမှန်တကယ်ယူဆောင်လာခြင်းမရှိပဲ နယ်စပ်ဒေသတွင် လက်နက်အားကိုးဖြင့် မင်းမူနေသော အဖွဲ့များကို မြေပေါ်သို့ တရားဝင်ဆွဲခေါ်လာပြီး နိုင်ငံရေးစွက်ဖက်ခြင်းများ ၊ နောက်ခံစီးပွါးရေး တောင့်တင်းရန် ပြုလုပ်ခြင်းများသာ လုပ်ဆောင်ပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။ တစ်ဖက် လက်နက်ကိုင်များ မှလည်း ရရှိလာသော အခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးမခံဘဲ မြေပေါ်သို့ရောက်ရှိနေခိုက်တွင် ၄င်းတို့လိုချင်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဟု အမည်တပ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်နိုင်ငံမှမရှိသည့် ပြည်နယ်တစ်ခု-စစ်တပ်တစ်ခု ပေါ်လစီ ကိုသာ ဇောင်းပေးပြောနေသည့်အပြင် နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်ခြင်း ၊ ညီလာခံများကျင်းပခြင်း တို့ဖြင့် ၄င်းတို့၏ မူဝါဒ ရေးရာများကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေသည်။ ၎င်းတို့ လက်အောက်တပ်များကလည်း ဒေသအတွင်းလက်နက်ကိုင်ကာ သွားလာနေပြီး အခွန်အခနှင့် လူသစ်များ စိတ်ကြိုက် ကောက်ခံနေသည်။
အကယ်၍သာ ဤဆွေးနွေးပွဲကြီးသည် အီလည်လည်ဖြင့် ပေရှည်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံမှ လုံးဝမဖြစ်နိုင်သော တောင်းဆိုမှုများပေါ်ထွက်လာခဲ့လျှင် ထပ်မံ၍ ကွဲကြပြဲကြဦးမည်။ ဖြစ်ပြီးနောက် တွင် MPC သည်လည်း ရရှိထားသောအလှူငွေများကို ပြန်လည်စာရင်းမရှင်းပဲ ငြိမ်သွားတော့မည်။ အပစ်ရပ်မည့် အဖွဲ့များအတွက် ကားပါမစ်၊ သစ်ပါမစ် များချပေးထားသည့် လုပ်ကွက်များကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် များအမည်များဖြင့် လုပ်ကိုင်၍မရသည့်အတွက် ၎င်းတို့အမည်ဖြင့် ကိုယ်စားလုပ်ပေးနေရသည်မှ ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်များကိုလည်း ဖင်ခုထိုင်ကာ အနားယူပေမည်။ဆွေးနွေးပွဲကာလတွင် လူသစ်စု၊အခွန်ကောက်ငွေများ၊ စခန်းသစ်များ ဆောက်လုပ် ပြီးသော အင်အားဖွံ့ဖြိုးလာသည့် လက်နက်ကိုင်များနှင့် စစ်ပွဲများ ပြန်ဖြစ်လာဦးမည်။ ထိုသို့ဖြင့် သံသရာလည်နေကာ မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော ဒီမိုကရေစီနိင်ငံသို့ ရောက် အောင် မသွားနိုင်တော့ပဲ စစ်ပွဲနွံအတွင်း တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်ကာ ပြည်သူများကို ဒုက္ခနွံတွင်းမှ မတက်နိုင်အောင် ဆွဲထားသော ခဲတစ်လုံးဖြစ်နေပြီလားဟု စဉ်းစားမိပါတော့သည်။